တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မြကန်သာတို့ တည်ရာမြေ ...
မြကန်သာတို့ တည်ရာမြေ ...
တူစွ ဟုတ္တာ။ ... ။
ဒီခရီးကို သွားရမယ်ဆိုတော့ မသွားခင်ကတည်းက ကြိုတင်ပြီး ရင်ခုန်နေမိတယ်။ သွားရမယ့် ခရီးက သိပ်တော့ မနီးလှပါဘူး။ Cumbria နယ်မြေက Lake District လို့ ခေါ်တဲ့ အရပ်ဒေသပါ။ တောင်တွေ ၀န်းရံထားတဲ့ အလယ်မှာ သဘာဝ ဖြစ်တည်နေတဲ့ ရေကန်တွေ အများကြီး တည်ရှိရာ အရပ်ဒေသမို့ ... "မြကန်သာတို့ တည်ရာမြေ" ... လို့ ကျမက အမည်ပေးထားမိပြီး ငယ်ငယ်က သင်ရတဲ့ မြကန်သာ ကဗျာလေးကို စိတ်ထဲ ရွတ်ဆို နေမိပါရဲ့။
The Lakeland Poets စာအုပ်ထဲက Cumbria ဒေသရဲ့ သရုပ်ဖော် ပန်းချီမြေပုံ
Lake District ကို စပြီးရင်းနှီးခဲ့ရတာက William Wordsworth ကြောင့်ပါ။ ဒီရောက်ကတည်းက daffodil တွေပွင့်ချိန်ဆို ကျမက တချိန်လုံး W. Wordsworth အကြောင်းပြောနေတော့ ကျမအမက ဒီစာအုပ်ကလေး ၀ယ်ပြီး ကျမကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။
The Lakeland Poets စာအုပ်က Lake District က ကဗျာဆရာတွေရဲ့ ကဗျာတွေကို စုစည်းထားတဲ့ စာအုပ်ပါ။ ကဗျာဆရာတွေရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိတွေ၊ သရုပ်ဖော် ပန်းချီတွေ ဝေေ၀ဆာဆာပါတဲ့ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးတော့မှ W.Wordsworth ရဲ့ ဇာတိဟာ Lake District မှာလို့ သိခဲ့ရတယ်။ သူတို့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာတွေကို ဖတ်ပြီးတော့ အဲဒီနေရာကို သွားချင်စိတ် ပိုပြင်းပြခဲ့ရပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ၁၈၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉၊ အင်္ဂါနေ့ မနက် ၈ နာရီ ၂၂ မိနစ်မှာ အိမ်ကစထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ကျမတို့ ဘက်ကတော့ ရာသီဥတု သာသာယာယာပါပဲ။ အပူချိန်တက်မယ်လို့လဲ မိုးလေ၀သက ပြောထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ Cumbria နယ်ထဲ ၀င်တော့ ရာသီက စပြီး မှိုင်းပျပျ ဖြစ်လာပြီ။ မိုးလည်း ခပ်ဖွဲဖွဲရွာတယ်။ တောင်အနိမ့်အမြင့် ပေါ်မှာ သွယ်တန်း ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ လမ်းတွေပေါ် ဖြတ်ပြီး ကားလေးက တရိပ်ရိပ်ပြေးနေတယ်။ တောင်ခိုးတွေက တဝေေ၀ ... ။
တောင်တန်းတွေအဆုံး ... ရေကန်ကြီးတကန်ကို ဗြုန်းဆို မြင်လိုက်ရတယ်။ ၀င်ဒါမီယာ ရေကန်သာတဲ့ ... ။ ၀င်ဒါမီယာကို ရောက်တော့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ သာသာရှိနေပြီ။
၀င်ဒါမီယာ ရေကန်ထဲမှာ ရွက်လှေငှါးစီးချင်ရင် ...
စနေတနင်္ဂနွေ မဟုတ်ပေမဲ့ ကလေးတွေ ကျောင်းပိတ်ရက်မို့ လူတွေ စည်ကားနေတယ်။ ဘဲတွေ ငန်းတွေကို အစာကျွေးလို့ရတယ်။ ကန်တပတ် သင်္ဘောစီးချင်ရင်လဲ ဒီနေရာမှာ စီးလို့ရပါတယ်။
ငှက်ကလေးများ ခိုနားနေတယ် ...
၀င်ဒါမီယာရေကန်က နာမည်အကြီးဆုံး လူအစည်ကားဆုံးပါ။ ၀င်ဒါမီယာကို နှုတ်ဆက်ပြီး Ullswater (အောလ်စ်ဝေါတား) ရေကန်ဘက်ကို ဆက်သွားကြပါတယ်။ Ullswater ရဲ့ ပုံစံက ရှည်ရှည်သွယ်သွယ်၊ ရေကန်ဘေးတလျှောက် ကားလမ်း ဖောက်ထားတာမို့ ကားပေါ်ကနေ ရေကန်ရဲ့ အလှကို မြင်ရတယ်။ လမ်းတလျှောက်မှာ ကားရပ်နားဖို့ နေရာလေးတွေ မကြာမကြာ တွေ့ရတယ်။
Among the mountains were we nursed, loved Stream!
Thou near the eagle's nest - within brief sail,
I, of his blod wing floating on the gale,
Where thy deep voice could lull me! Faint the beam
(To the River Derwent - W. Wordsworth)
One, the fairest of all rivers, loved
And from his alder shades and rocky falls;
That flowed along my dreams. For this, didst thou
(The Prelude - W. Wordsworth)
Yet once again do I behold the forms
Of these huge mountains, and yet once again
Standing beneath these elms, I hear thy voice,
Beloved Derwent, that peculiar voice
Heard in the stillness of the evening air
Half-heard and half-created.
(The voice of the Derwent - W. Wordsworth)
Ullswater ရေကန်ဆီကို ဆင်းရာ ကျောက်လှေခါး လမ်းကလေး
တောင်တန်း၊ ကျောက်ဆောင်၊ သစ်ပင်
အေးချမ်းတဲ့ အရပ်ဒေသပင် ...
Upon the mountain's edge with light touch resting,
Thereabrief while the globe of splendour sits
And seemsacreature of the earth; but soon
More changeful than the Moon.
(A Sunset - Samuel Taylor Coleridge)
ကန်တော်သာများကို ကျောခိုင်းပြီး ... ။
အပြန်လမ်းမှာ သီချင်းလေးတွေ ညည်းဆိုရင်း ... ည ၉ နာရီမထိုးခင်လောက် အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။
မျက်စိထဲမှာတော့ တောင်တွေ ကာရံထားတဲ့ အလယ်က ရေကန်တွေရဲ့ မြင်ကွင်း ကပ်ငြိတွယ်တာ ပါလာဆဲ။
၁၉၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉
ရည်ညွှန်း။ ။ အင်္ဂလိပ် ကဗျာများကို The Lakeland Poets စာအုပ်မှ ယူထားပါသည်။
* မြကန်ကဗျာမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ စာကြောင်းလေးတွေ ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်။
အမှန်ကို ပြန်ပြင်ပေးသူ ကိုဟယ်ရီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
(၂၀၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၉)
Posted by မေဓာဝီ at 12:45 PM
Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း
8/19/2009 1:37 PM
မမေ.. ရဲ့ ခရီးတခွင်..ပုံတွေ..ခုမှ လာစုကြည့်ဖြစ်တယ်။
မြကန်သာ ကဗျာလေးကို..လန်ဒန်ပြတိုက်က..ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူလာသေးတယ်လေ။ မြန်မာလို မူရင်း..
တခါတလေလည်း ရှုခင်းတောတောင်တွေပဲ..ကြည့်ချင်နေတယ်။း)
8/19/2009 2:59 PM
8/19/2009 9:08 PM
မြကန် က ကျန်နေတာလေးတွေ ရှိသေးတယ် မမေ ...
၀တိံသာက (ဘုံဝတိံက ... လို့လဲ တချို့ကပြောတယ်)
8/20/2009 4:50 PM
W.W.W အကြောင်း ခရီးသွားမှတ်တမ်းတပုဒ် ရေးဦးမယ်လို့တော့ ဟိုတလောက ပြောထားလို့ သိတော့ အသိသား...
ဒါပေမယ့် ခေါင်းစဉ်မြင်တော့ မိတ္ထီလာများ ရောက်သွားလေသလား ထင်လိုက်မိသေးတယ်...း)
အမှတ်တရနေရာမျိုးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေ့ခွင့်ရတာ ပျော်စရာပဲ...
8/20/2009 7:34 PM
ညီမ ... မနာလိုမရှိနဲ့နော် ကျောင်းမဖွင့်ခင်လေး သွားထားရတာ။ :)
မကေ ... မကေရဲ့ ဆွစ်ဇာလန်ရှုခင်းတွေလဲ သိပ်လှတယ်။ ကျမက ကမန်းကတန်းရိုက်ရတော့ စိတ်တိုင်းသိပ်မကျလှဘူး။
ရည်မွန်ထိပ်ထား ... လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ။
ကိုဟယ်ရီ ... အမှားပြင်လိုက်ပါပြီ။ ၉ တန်းတုန်းက ကျက်ခဲ့ဖူးပေမဲ့ ကြာတော့ မေ့သွားတာ။ စာမကြေတာလေ။ :D
ကိုလူထွေး ... အင်္ဂလန်ရောက်ရင် အဲဒီနေရာလေးတွေ သွားလည်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အားလုံး ... ကျေးဇူးပါရှင်။
8/20/2009 11:09 PM
မေရေ… လှလိုက်တဲ့နေရာလေးတွေနော်… ရောက်ခွင့်လည်ခွင့်ရတာ ကံကောင်းပါတယ်ညီမရေ… ဒီပုံလေးတွေကြည့်ပြီး အင်းလေးကန်ကို လွမ်းမိတယ်…
8/21/2009 6:16 AM
Pride & Prejudice တို့ Sense and Sensibility တို့ကို လွမ်းသွားတယ် မမေရေ..
8/28/2009 12:36 AM
ဖတ်ရင်းနဲ့ ရင်ထဲစိမ့်စိမ့်လာလွန်းလို့ခြောက်သွေ့ မောဟိုက်နေရင် မြကန်သာ လို့ ချီ ပြီရွတ်ရွတ်ချတာပဲ အစ်မရယ် ကြာနံ့ လည်း သင်း ရင်ထဲမှာလည်း ရှင်းတော့ ကြိုက်လှတယ်
Law အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ချောချော မွေ့ မွေ့ ရှိ
9/08/2009 7:09 PM
8/12/2010 6:32 PM
သုံးနှစ် … သုံးမိုး
မြန်မာရှေးစာဆိုတို့၏ ကဗျာများ (၇)
သျှင်ဥတ္တမကျော် တောလား (၄)
အမြဲလန်းဆန်းသည့် ပန်းမြတ်သပြေညို ...
မြန်မာရှေးစာဆိုတို့၏ ကဗျာများ (၆)
ငါက ... လူ
သျှင်ဥတ္တမကျော် တောလား (၃)
၀သုနြေ္ဒ၏ ရှိုက်သံ (၁)
မြန်မာရှေးစာဆိုတို့၏ ကဗျာများ (၅)
ဥပုသ်ထွက် မနက်စာ ...
၀ါခေါင် မေတ္တာ ...
သျှင်ဥတ္တမကျော် တောလား (၂)